သရုပ်ဆောင် ဦးခင်လှိုင်ရဲ့ သမီးလေး သဇင်ထူးမြင့်က သူမရဲ့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲဖြစ်သူ ပျောက်နေလို့ အကူအညီပေးကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲဖြစ်သူက ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီကတည်းက အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တာပါတဲ့။
သဇင်ထူးမြင့်က သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာ ” သဲရဲ့ အကိုတစ်ဝမ်းကွဲ ၂၁ရက်နေ့ ညနေ၆နာရီတည်းက
ခုချိန်ထိ အဆက်သွယ် မရတော့ပဲပျောက်နေလို့ ပါ … သူကပုံမှန်ဆို လူလည်းအရမ်းကြောက်တတ်တယ်။ အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်လည်း သိပ်မထွက်တတ်ဘူး… အပေါင်းအသင်းလည်း အရမ်းနည်းပါတယ် …. အခုတက်နေတဲ့ သတင်းတွေကြောင့်လည်း မိဘတွေအရမ်းတွေစိတ်ပူနေရပါတယ်…. တွေ့ ရှိခဲ့လျှင် ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကို ဆက်သွယ်ပေးပါနော် 09893999622 ” ဆိုပြီးတင်ထားတာပါ။
အဆိုပါ သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံက သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားသင့်တယ်လို့ အကြံပေးထားပြီး သဇင်ထူးမြင့်က အကြောင်းကြားထားကြောင်း အခုချိန်ထိဆို ရက်ကြာလာပြီဖြစ်ပေမယ့် မထူးသေးလို့ အခုလို လူမှုကွန်ရက်မှာ တင်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ပြန်ရှင်းပြထားပါတယ်။ သဇင်ထူးမြင့်တို့ မိသားစုတွေက လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျားဖောင်လူကုန်ကူးမှု ကိစ္စကြောင့် သူတို့အစ်ကို ပျောက်ဆုံးမှုက ဒီကိစ္စကြောင့် ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်နေကြတယ်ရယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
သဇင်ထူးမြင့်ရဲ့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲဖြစ်သူကို အမြန်ဆုံးပြန်တွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်၊ ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်း ဒီ ပတ်စပို့ ပုံထဲကသူကိုတွေ့ရင် ခေးလေး သဇင်ထူးမြင့်ပေးထားတဲ့ ဖုန်းလေးကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား ကူညီပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။